Kungenzeka yini ukuthi udle ama-dumplings oshukela > Ukudla ngesifo sikashukela
Ngabe ama-dumplings avunyelwe kwabanesifo sikashukela
Ukwelashwa kwesifo sikashukela kanye nezici zokudla okunempilo kweziguli
Ngenxa yezinkinga ezinkulu ezingasinakwa yilesi sifo, kusetshenziswa indlela ebanzi ekwelashweni, okubandakanya, okokuqala, ukuzithiba kokudla okunempilo.
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1, kunconywa ukuthi zigcine idayari ekhethekile okubhalwe kuyo konke ukudla, isikhathi nezinkomba zemitha.
Futhi, idayari kufanele ibe nemininingwane ngohlobo lwe-insulin enalinywe ngasikhathi sinye noma kwesinye (okwenziwa isikhathi eside noma esifushane).
Njengoba umzimba ungaphenduli i-insulin ngohlobo 2 sikashukela, imijovo yama-hormone ayinikezwe isiguli. Ukwelapha kuhloselwe ukwenza umzimba ube ngokwejwayelekile futhi kuqukethe ekudleni (itafula No. 9) nokuzivocavoca umzimba okujwayelekile.
I-Diet ithebula 9 ukudla okudalwe ngokukhethekile odokotela okubandakanya uhlu lokudla okuvunyelwe futhi oluvinjelwe, kanye nezincomo zokuthi ungakupheka kanjani, zingaki ngosuku ngosuku isiguli okufanele sidle kuzo, futhi ngaziphi izingxenye.
Kungenzeka yini ukudla umvimba nesifo sikashukela?
Imithetho Yokudla Okuyisisekelo Yesifo Sikashukela
ukudla kufanele kube nenani elikhulayo lemikhiqizo yamaprotheni,
ukudla usawoti okulinganiselwe nezinye izinongo,
izitsha zibhakwa, zithosiwe noma zimane ziphekiwe,
Ukudla ikhalori ngosuku akufanele kudlule i-2300 kcal,
Ukudla okunempilo kuboniswa njalo emahoreni amane,
ungadla ukudla okunesitashi nezithelo ezimnandi ngamanani amancane,
ayikwazi ukudla: ama-dessert aqukethe ushukela, ama-khekhe, izithelo ezomisiwe, ingulube, amasoseji, amagilebhisi.
Yini i-XE ne-GI?
Isifo sikashukela ngasinye sineshadi lokuqhathanisa lomkhiqizo amayunithi wesinkwa futhi liyatholakala online. Kusukela namuhla sikhuluma ngendishi enjengokulahlwa nokudonsela phansi, sicacisa ngokushesha ukuthi inani elivunyelwe lokudonswa kwifomu esisetshenziselwa ukubabona liyizingcezu ezingama-28 ngokudla ngakunye, ngoba amadombolo ama-4 aqukethe i-XE eyodwa.
Ngokuqondene nokudonsa, izinto ziyinkimbinkimbi kakhulu, ngoba inani lamayunithi esinkwa ahlukahluka kuye ngohlobo lokugcwaliswa. Amadombolo ngamazambane - akukho ngaphezu kwe-15, ama-dumplings nge-cottage shizi kanye noshukela obambisayo - 20, ama-dumplings ngeklabishi - 18, ama-dumplings ngezithelo - akukho ngaphezu kwezingcezu eziyi-10.
Inkomba ye-glycemic, noma i-GI, iyinkomba yokuthi umkhiqizo ungakanani ukwandisa ushukela we-plasma. I-GI ephezulu, ephakeme futhi ngokushesha ushukela izokhuphuka. Imikhiqizo yamakhekhe, ama-dessert, uju nokudla okune-sitashi kune-GI ephezulu kakhulu.
Amadombolo nokubekelwa phansi kwabantu abanesifo sikashukela
Ngokusekelwe kulo lonke ulwazi olutholwe ngenhla, kungaphethwa ngokuthi ama-dumplings wesifo sikashukela avunyelwe ukuba adle, kanye nokudilizwa. Kepha kukhona izincomo eziningana ezizokusiza ukuthi ujabulele izitsha zakho ozithandayo futhi zingalimazi impilo yakho.
Amadombolo awunawo ushukela, kepha lapho ulungisa inhlama, kusetshenziswa ufulawa kakolweni, okwaziyo ukuphakamisa amazinga kashukela endabeni yemizuzu. Ngohlobo lwesifo sikashukela esincike ku-insulin, izikhathi ezinjalo ziyanconywa ukuba zigwenywe, ngakho-ke uma unquma ukupheka ama-dumplings, uzenzele kusuka ku-cornmeal noma kakolweni, kodwa i-wholemeal. Ukuzpheka ngokwakho kuzosiza ukugwema izithasiselo zokudla ezingafuneki namakhalori angeziwe.
Okuqukethwe kwekhalori okuphakathi kwama-dumplings ngeengulube nangaphansi kwenyama kungama-203 kilojoule kumagremu ayi-100 (cishe ama-5 dumplings), inkukhu - amakhalori ayi-180. Izinkomba lezi zibalwa ngaphandle kokukhipha amandla. Kwisifo sikashukela sohlobo lwesibili, kunconywa ukulandela ukudla okune-kilojoule ephansi, ngakho-ke sincoma ukupheka ama-dumplings agcwele inyama yenkukhu futhi singadli izicucu ezingaphezu kuka-12 ngasikhathi sinye, ukugqoka isidlo ngo-ukhilimu omuncu osuxutshwe ngo-10% noma nocezu lwemargarine. Indlela engcono yokupheka noma yiluphi uhlobo lokudla lwabantu abanenkinga ye-endocrine ukushaya ngamandla. Ama-dumplings afakiwe awalungele abanesifo sikashukela.
Can Cocoa onesifo sikashukela
Amadapula nawo angalungiswa ngokufakwa kwe-cornmeal. Ngokugcwaliswa okumnandi, kusetshenziswa i-sweetenerener (i-stevia, i-sucralose). Uma usebenzisa i-xylitol noma i-sorbitol, adinga ukungezwa kancane, ngoba angavusa uhudo. Lapho upheka okulahlwa ngamazambane, umuntu kufanele acabangele iqiniso lokuthi amazambane angumkhiqizo onesitashi, empeleni onobungozi kushukela. Ukwehlisa okuqukethwe kwesitashi kumazambane abunjiwe, udinga ukuhambisa amazambane ahlutshiwe emanzini afudumele okungenani amahora amane, bese uyachitha bese ubilisa amanzi.
Isifo sikashukela akusona isigwebo. Lokhu kuxilonga akusho ukuthi kufanele unikeze izitsha zakho eziyintandokazi. Ukulandela izincomo zethu nokwenza ushintsho ekuphekeni okujwayelekile, ungazifaka ngenkani ngama-dumplings kanye nama-dumplings ngokugcwaliswa okuhlukile, ngaphandle kokukhathazeka ngokuxhuma okungajwayelekile ushukela wegazi.
Kungani abanesifo sikashukela kungafanele badle ama-dumplings ejwayelekile
Ukulungiselela ama-dumplings, ufulawa kakolweni wesilinganiso esiphakeme kakhulu noma sokuqala uvame ukusetshenziswa. Ine-index ephezulu ye-glycemic futhi, uma idliwe, inomthelela ekwandeni koshukela kwabashukela. Enye isithako esingathandeki kule sitsha ukugcwaliswa kwenyama. Ikakhulu uma lena inguqulo yayo yasendulo, lapho ingulube enenyama yenkomo ithathwa.
Njengoba wazi, ukusetshenziswa kwenyama enamafutha kuholela ekuqongeleleni kwama-plaque emikhunjini, okungadala ukuvela kwe-atherosclerosis, ukushaya kwenhliziyo noma unhlangothi. Abantu abanesifo sikashukela banenkinga yemetabolic, ngakho-ke ukudla inyama kuthinta kabi imizimba yabo. Amafutha awacutshungulwa, amuncwa kahle, ngakho-ke, ingozi yezinkinga ngokuya ngemuva kokuqongelwa kwe-cholesterol emibi.
Ukulungiselela ama-dumplings wesifo sikashukela, kuyalulekwa ukuba uthathe ufulawa wekhalori ongaphansi kwekhalori esikhundleni sikakolweni. Kodwa-ke, kufanelekile ukukhumbula ukuthi i-GI yayo ingamayunithi angama-70. Inyama yokugcwalisa ingathathwa njenge-nonfat yokudla.
Ukuze uvimbele ukwanda kwalesi sifo, kubalulekile koshukela ukuba bazi ukuthi mangaki ama-carbohydrate asezindlini nokuthi mangaki amafutha ayingozi kuwo.
Inani lokudla okwenziwe ngama-dumplings ngamagremu ayi-100 kanje:
Amagremu angu-15,5 amaprotheni
Amagremu ayi-8 wamafutha,
29,7 amagremu ama-carbohydrate.
Amayunithi wesinkwa engxenyeni engu-100 yegramu yenyama - 2,5. Inkomba ye-glycemic amayunithi angama-60. I-cholesterol esitsheni ingu-33,6 mg, lapho isilinganiso esilinganiselwe singama-300 mg.
Njengoba ukwazi ukubona, lo ngumkhiqizo onama-khalori aphezulu angakhuphula amazinga kashukela. Ngakho-ke, ukuhlanganisa ama-dumplings ajwayelekile noshukela akusifanele. Uma ubusafuna ukupheka lesi sidlo, ungakwenza ngaphandle kokulimaza impilo yakho.
Yikuphi ufulawa okufanele ukhethe
Abanesifo sikashukela abavunyelwe ukudla ufulawa kakolweni omhlophe. Ine-GI ephezulu (amayunithi angama-85), futhi lapho isetshenziswa njengokuhlola, ama-carbohydrate ayo ayangena ngokushesha emathunjini, abangele ukwanda okukhulu koshukela. Kuvunyelwe ukusebenzisa ufulawa onamaqabunga ne-bran ezitsheni. Amadayiphu enziwe ngofulawa we-rye wesifo sikashukela awusizo kakhulu, noma ngabe kungenxa yombala omnyama, azothola i-hue engajwayelekile.
Isifo sikashukela isifo sikashukela yisifo esinamandla esidalwa i-endocrine esihlala sihambisana nokwanda okuqhubekayo kokuhlaselwa kweglucose egazini. Kuzo zonke iziguli, ukwephulwa okwengeziwe kwezinqubo ze-metabolic emzimbeni kuyabonakala, okuholela ku-pathology yezitho eziningi nezinhlelo.
Ukudla kungenye yezigaba ezibaluleke kakhulu ekwelapheni umuntu nokugcina amazinga ashukela evamile. Impendulo yombuzo wokuthi kungenzeka yini ukudla ama-dumplings onesifo sikashukela cishe ihlala ingemihle.
Kunezincazelo eziningi zalokhu:
Ufulawa osetshenziselwa ukudala indishi une-GI engaphezu kuka-84. Ama-carbohydrate awo amunca ngokushesha amathumbu, okuholela ekwandeni okusheshayo kokuxineka kashukela wegazi,
Ukugcwaliswa kokudonswa okulungiselelwe ngendlela yendabuko kuqukethe inani elikhulu lenyama yengulube. Kuholela ekufakweni kwe-cholesterol ezindongeni zemithambo yegazi futhi kufaka umthwalo omkhulu kwizitho zokugaya zeziguli,
Ukuhlanganiswa kwempuphu nenyama enamafutha kungenye eyingozi kakhulu kwabanesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo. Ukuhlanganiswa okunjalo kuholela njalo ku-hyperglycemia futhi kufanele kungafakwa ekudleni kweziguli.
Ukuze uqonde imiphumela yokudonsa emzimbeni, udinga ukwazi ngezimpawu zokudla nokwakheka kwesitsha. I-100 g yomkhiqizo wendabuko uqukethe:
16 g wama-peptides,
9 g we-lipids
30 g wama-saccharides.
Inkomba ephelele ye-glycemic yesitsha ingama-60. 100 g we-dumplings cishe amayunithi esinkwa ayi-2,5. Ingxenye enjalo iqukethe kuze kufike ku-35 mg we-cholesterol (isilinganiso sansuku zonke singama-300 mg).
Ama-dumplings wendabuko angumkhiqizo wekhalori ephezulu onamandla okuvusa i-hyperglycemia. Abanesifo sikashukela sohlobo lokuqala bayenqatshelwa ukuzisebenzisa ngokuphelele. Ngesifo sohlobo lwesibili, kukhona okuhlukile.
Amadombolo, ama-dumplings, i-ravioli, i-khinkali - izitsha ezihlwabusayo kakhulu okungafanele ukuthi zidliwe ngabantu abanesifo sikashukela. Zonke zidalwe kusuka kufulawa nenyama noma okunye ukugcwaliswa. Ngohlobo 2 sikashukela, lokhu kuholela ekuzuzeni isisindo futhi kugxume ku-glycemia.
Noma kunjalo, lapho kudalwa ama-dumplings ngokuya ngezindlela zokupheka ezikhethekile, ukungenisa kwabo ekudleni kweziguli kwesinye isikhathi kuvunyelwe. Kodwa-ke, bayoba nezimfanelo zokunambitheka ezihluke kancane, ezinciphisa inani lama-connoisseurs wezitsha ezinjalo.
Umqondo ophambili lapho kulungiswa amadombolo okudla ukunciphisa imiphumela emibi kafulawa kanye nokugcwaliswa kwamafutha aphansi. Lokhu kuzonciphisa umthelela omubi emzimbeni wesiguli.
Ufulawa weprimiyamu wendabuko osetshenziselwa ukudala isitsha une-GI ephezulu kakhulu futhi uholela ekwandeni kokuxineka kweglucose egazini. Izifanekiselo ezinhle kuzo yile:
Ufulawa we-coarse noma i-bran.
Inkomba ye-glycemic yomkhiqizo wokuqala ingama-70, okunciphisa usongo olungaba khona kumgciwane we-carbohydrate metabolism. Amagatsha aqukethe inani elikhulu le-fiber, evimbela ukumuncwa kwe-glucose emathunjini.
Okungalungile kwe-connoisseurs of dumplings kungaba umbala womkhiqizo wokugcina nokunambitheka kwawo. Uma usebenzisa amabanga aphansi kafulawa, unombala omnyama.
Ukukhetha inyama nama-toppings
Lapho udala ukugcwaliswa okuvame kakhulu kwama-dumplings, kusetshenziswa izinhlobo ezimbili zenyama - inyama yenkomo nengulube. Ingxenye yokuqala yeziguli ezinesifo sikashukela isalungile, kodwa hhayi eyesibili. Ukunciphisa umphumela we-pathological ku-carbohydrate metabolism, udinga ukushintsha ukwakheka kokugcwaliswa kwesitsha.
Izinketho ezinhle zokuyakha yile:
Inkukhu noma enye inyoni,
Ama-dumplings wemifino awathandwa kakhulu, ngakho-ke, ukudala isidlo nokulondolozwa kwe-juiciness yenyama edliwayo, kunconywa ukukuhlanganisa nemifino ngaphakathi kwenhlama. Lokhu kuzonikeza ukunambitheka okuthokozisayo emkhiqizweni futhi ngeke kulimaze impilo yesifo sikashukela.
Lapho ulungiselela izithako, kuzodingeka ukhumbule izici eziningana:
Isikhumba senkukhu siqukethe amanoni amaningi. Kufanele isuswe ngaphambi kokupheka,
Kungcono ukupheka noma ukubhaka inyama. Umkhiqizo othosiwe awubekezelelwa kakhulu yisifo sikashukela,
Inyoni encane ihlala ifiseleka njalo. Inezinto ezingezinangozi kangako kanye ne-cholesterol,
Inyama yenkomo iyisinqumo esihle sokulahlwa kokudliwayo,
Ingulube ebunjiwe ivunyelwe Into esemqoka ukusebenzisa izingxenye zayo ezingenawo amafutha.
Lapho udala ukugcwaliswa okumnandi kwama-dumplings, kubaluleke kakhulu ukuthi ungagxili. Ngaphandle kwalokho, umfutho wegazi uyenyuka, othinta kabi inhlala-kahle yesiguli. Umthamo wansuku zonke kasawoti akufanele udlule ku-5 g.
Abathandi abaningi be-dumplings bathanda ukusebenzisa amasosa ahlukahlukene. Banikeza isidlo ukunambitheka okukhethekile futhi bakwenze kukhange ngokwengeziwe. Kunoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela, lokhu kuhlanganiswa kuzodingeka kushiywe uma kususelwa kumikhiqizo elandelayo:
Kuvunyelwe ukusebenzisa inani elincane likaviniga. Kodwa-ke, kungcono ukuyifaka esikhundleni sejusi kalamula. Izophinda igcwalise ukulethwa kwe-vithamini C futhi inikeze izinongo kancane esitsheni. Isidlo sokudla esenziwe nge-yogurt enamafutha aphansi namakhambi kufanelekile kubantu ababongayo ukuthambisa ngokunambitheka.
Ungapheka futhi udle kanjani?
Ukuthola inzuzo enkulu kusuka kuma-dumplings, udinga ukuziphekela ngokwakho. Imikhiqizo eqediwe yisitolo ithinta kabi i-carbohydrate metabolism yeziguli. Kunezindlela eziningi zokupheka zomkhiqizo wokudla. Enye yazo izokwethulwa ngezansi.
Ukwakha amadombolo amnandi futhi anempilo, uzodinga izithako ezilandelayo:
Isifuba saseTurkey - 500 g,
I-50 ml yesoso soya
50 ml uviniga ojwayelekile
I-100 g "Beijing" inqunywe,
Izimpande ze-ginger (ngokuzikhethela zifakwe esinye izinongo).
Inqubo yokulungiselela ukudonswa kwempahla ifaka lezi zinyathelo ezilandelayo:
Inyama inhlabathi ibe inyama eyosiwe. Kuyo engeza i-15 ml kasoso, uviniga, i-ginger encane, iklabishi yaseChina. Ubuningi obumphumela buhlanganiswa,
Ukuxuba inhlama yokudla kusuka kufulawa ye-bran ngokufakwa kweqanda eli-1. Kuyadingeka ukufezekisa ukufana nokuqina ngokulinganayo ngaphandle kweziqalo,
Bese wakhe imibuthano emincane yenhlama (ungasebenzisa ingilazi)
IForemeat ibekwe kumaqebelengwane futhi amadombolo ayenziwa,
Babekwe endizeni efafazwe ngefulawa, yathunyelwa kuholi,
Kumakhaza, umkhiqizo ungagcinwa isikhathi eside kakhulu. Kubilisiwe njengoba kunesidingo.
Ukupheka ama-dumplings okudla kungcono kwabashadikazi. Kulokhu, bagcina izakhamzimba eziningi futhi bangalahlekelwa ujusi wokugcwaliswa kwabo.
Isitsha esilungiselelwe ngokuya ngeresiphi engenhla sicishe sibe yingxenye ephakeme yamakhalori njengoba nesitsha esisezingeni elivamile lokudalwa kwaso. Ungadla kuwo kuze kube izikhathi ezingama-2-3 ngesonto. Amadombologi akufanele ahlukunyezwe.
Kuyingozi kangakanani isifo sikashukela?
Esikhathini sikashukela ngokuyinhloko sohlobo lokuqala (i-CD1T), umzimba uphelelwa amandla okukhiqiza i-insulin, ngoba amaseli we-pancreatic beta abhujiswa ngokushesha ngenxa yokusabela kwe-autoimmune. Ukusinda kungenzeka kuphela ngokwelashwa kwe-insulin.I-SD1T yisifo esingajwayelekile esihlasela abantu ababalelwa ku-150,000 kuya ku-200,000 eRussia.
Uhlobo 2 sikashukela i-mellitus (T2DM) kuvamile kubantu abadala. Namuhla, ngisho nentsha iyagula nge-T2DM. Isiguli ngasinye sesithathu esineminyaka engaphezu kwama-55 sinesifo i-T2DM. Kwenzeka njalo ukuthi lesi sifo sitholakala ngisho nasezinganeni nasebusheni abakhuluphele ngokweqile.
Isici esihlukile se-T2DM ukuswela ukuzwela kwamangqamuzana omzimba kuma-insulin endulin. I-insulin yehlisa ushukela wegazi. Ngokuphikisana ne-T1DM, i-insulin yakhiwa ku-T2DM, kepha iyayeka ukusebenza ngoba amangqamuzana omzimba awazweli ku-hormone. Iziguli ziyamelana ne-insulin. Ukwanda kwezigameko ze-T2DM kubangelwa kakhulu yimikhuba yendlela yokuphila, njengokudla okuphezulu emafutheni nokudla okungalingani, kanye nokungasebenzi.
Uma izinga likashukela wegazi likhuphuka isikhathi eside, kunezinkinga ezijwayelekile zesifo sikashukela - ukulimala kwezinzwa, izinso, umbono nemithambo yegazi (ikakhulukazi encane - i-microangiopathy).
I-T2DM yisifo esivame ukwedlula zonke. Kulinganiselwa ukuthi cishe babalelwa ezigidini ezimbili abantu baseRussia abazi ukuthi bahlaselwe yilesi sifo. Akukho ngaphansi kwesibalo esikhulu sabantu eRussia abanokungamelana ne-insulin.
Okungenani abantu abayizigidi eziyi-6.5 eRussia banesifo sikashukela, futhi lo mkhuba uyakhula emhlabeni wonke. Kulinganiselwa ukuthi bangu-300,000 abantu abagula minyaka yonke. Kusukela eminyakeni engama-45, wonke umuntu wesithathu wakhubazeka ukubekezelelwa kwe-glucose. Wonke umuntu wesibili une-SD2T ngemuva kweminyaka engama-80.
Amadombolo - isitsha sikazwelonke saseRussia, esiphekwe emanzini noma umhluzi. Ama-dumplings enyama angasetshenziswa njengesitsha esikhulu. Namuhla, amadombolo ayingxenye yokudla okwenziwa ezweni lonke laseRussia futhi aziwa kuzo zonke izingxenye zezwe. Kukholelwa ukuthi umsuka wayo ulele ezifundeni zase-Urals, Volga naseSiberia. Kuthiwa i-cuisine yaseRussia kulezi zifunda incike kakhulu kuma-nomads base-Asia. Ngenxa yezinguquko zomlando ezenzeka e-Ukraine, ama-dumplings ayingxenye yokudlela yasendaweni yendawo, ephethwe amaRussia.
Kunemibono eminingana emayelana nomsuka nokusatshalaliswa kwama-dumplings. Abanye bacabanga ukuthi umsuka wasePheresiya kungenzeka kakhulu. Kulolu limi, i-pel ibizwa ngokuthi "izindlebe", kuthi isithombean ubizwe ngokuthi ngumkhiqizo wefulawa. Kunobudlelwane namasiko phakathi kwama-Udmurts nePersia.
Ama-dumplings afanayo ayatholakala nakwamanye amazwe e-Eurasia. Amadombolo ahluka ngosayizi kusuka ku-tortellini, i-tortelloni ne-ravioli. IManti, eyenziwe e-Asia Minor, ifana ne-dapsplings. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka nesitayela sokupheka sama-dumplings kufana ne-Georgia khinkali futhi ikakhulukazi ezinhlobeni eziqukethe inyama zamaphayi asePoland.
Ngenxa yokufuduka kwabantu besuka eRussia, amadombolo asabalele emazweni akhuluma isiJalimane, ikakhulukazi ezindaweni zasemadolobheni. Izinsimbi ziyatholakala zombili engxenyeni esheshayo yokudla (isibonelo, ezitolo zokudla) nasezitolo zokudlela, ngaphezu kwalokho, ziyatholakala nasekuphekeni kwasekhaya ezitolo zokudla.
Inhlama yezinsimbi iqukethe ufulawa, usawoti, amanzi namaqanda. Kucutshungulwa ngezindlela ezahlukahlukene kube izingcezu ezincane eziyindilinga yenhlama, ezigcwele inyama eyosiwe (ingulube, inyama yenkomo noma enye inyama) no-anyanisi, ugarliki, usawoti kanye nopelepele. Ngemuva kwalokho ama-dumplings aphekwe emanzini anosawoti noma umhluzi. Amadombolo agxishwe amazambane, iklabishi noma ushizi omuncu kashizi nokugcwaliswa kwama berry abizwa ngokuthi ama-dumplings.
Indlela esheshayo yokupheka ama-dumplings ukusebenzisa ama-dumplings, lapho ingxube yenyama eyakhiwe ibekwe khona isikhunta esikhethekile. Indlela yendabuko yokukhiqiza kwimodi ebhalwe phansi ehlanzekile ilungele kangcono ukulungiswa komkhiqizo. Ubukhulu benhlama kufanele bube buncane ngangokunokwenzeka. Ukuze wenze lokhu, khipha inhlama ngokucophelela ngangokunokwenzeka, bese uyigobisa (cishe ngo-7 kuye ku-10 cm). Ucezu ngalunye lwenhlama olutholakalayo luyembozwa ngengxube yenyama bese licindezelwa ngeminwe ku-semicircle ukuze onqenqemeni lube luncane ngangokunokwenzeka, futhi amadombolo avale kahle. Kamuva, "iziphelo" ezimbili ze-semicircle zihlanganiswa ndawonye.
Amadayimane ngokwesiko adliwa ngokulinganisa, kepha futhi nebhotela elicibilikile. Abanye basebenzisa uviniga, usawoti kanye nopelepele. Ukuze ugcine umkhiqizo, ungawumisa. Kuleli fomu, athengiswa kakade kuthengiswa.
Abantu abaningi babuza: kungenzeka noma cha ukudla ama-dumplings? Amadombolo awunawo ama-carbohydrate amaningi, amaprotheni namafutha, ngakho-ke, anconyelwa ukusetshenziswa ngabashukela. Kukhona okubizwa ngokuthi ama-dumplings kuphela kwabanesifo sikashukela, esilungiselelwe kusuka kufulawa ephelele.
Ukudla okufanele nokuzivocavoca okuyindlela ephumelelayo yokunciphisa amathuba esifo sikashukela. Izifundo ezinkulu zikhombise ukusebenza kwezindlela zokuthibela. Ukuncishiswa kwengozi yokuthola ushukela cishe ngama-60% kungatholakala ngezindlela ezilula - ukunciphisa isisindo somzimba, ukudla, phezulu ku-fiber, okuphansi emafutheni nasemzimbeni.
Kunezindlela ezi-5 zokuvimbela isifo sikashukela:
Ukwehla okungu-5-7% kwesisindo somzimba kunciphisa ingozi yesifo sikashukela ngesigamu. Ukwehliswa kwesisindo okungeziwe kwamakhilogremu amathathu kunciphisa nengozi.
Kunconywa ukudlala imidlalo amahlandla ama-3 ngesonto imizuzu engama-30 isikhathi ngasinye. Ukuzivocavoca okulula kunazo zonke yimilenze. Iziguli zinconywa ukuhamba nsuku zonke noma ukugijima. Ungasebenzisa i-pedometer ekala ibanga nsuku zonke. Kunconywa ukuthi udlule ngezinyathelo okungenani ezingama-5,000 nsuku zonke.
Ukudla kwansuku zonke kufanele kube ngamaphesenti angama-30 wamafutha,
Ukudla kungaqukatha amafutha afinyelela ku-10%. Lokhu kufaka, isibonelo, ibhotela, ushizi, umvimba, inyama namaphayi,
Kunconywa ukuthi udle amagremu ama-30 we-fiber ngosuku - isinkwa esiphelele, hhayi izithelo ezimnandi kakhulu nemifino eminingi. Iziguli ezisengozini enkulu yesifo sikashukela kufanele zidle izithelo noma imifino emihlanu emisha ngosuku. Imifino ayinciphisi kuphela ingozi yesifo sikashukela, kodwa futhi ne-colorectal carcinoma.
Iseluleko! Ungadla ama-dumplings ekhaya nasema-dumplings. Ungaziphekela ngokwedlule ngokwendlela yokupheka kwi-Intanethi, kepha kucwayiswa ngokungeza usawoti noshukela. Ngokwesifo sikashukela sokukhulelwa, ukuxoxa ngokudla kuyadingeka nochwepheshe. Udokotela uzotshela umama wesikhathi esizayo mayelana nakho konke ukuphambana nethamo le-insulin elidingekayo lapho uthatha amadombolo.
Amadombolo angafakwa ekudleni komuntu onesifo sikashukela, noma kunjalo, njengomthetho, ukudla okuqondile kungumuntu onempilo. Akunconywa ukuthi uzikhethele imikhiqizo wedwa futhi ukudla akunconywa. Kuyadingeka ukulandela zonke izincomo zochwepheshe ukuze ugweme izinkinga noma zande ngesifo esikhona. Kuyadingeka ukulungisa umthamo wemithi ngaphambi kokuthatha ama-dumplings ngokuya ngezincomo zikadokotela.
Ngingadla ama-dumplings wesifo sikashukela sohlobo 2? Kunjalo, kodwa kuya ngemithetho ethile yokupheka. Izinketho ezithengiwe zemikhiqizo eseqediwe zinqatshelwe ngokuphelele ngamatafula angu-9 wokulashwa - ngisho inani elincane lingadala ukulimala okukhulu kwempilo yeziguli ezinesifo sikashukela.
Inyama enamafutha ephezulu
Ufulawa we-Wheat wenqatshelwe ukudala isivivinyo sokudonswa kwalesi sifo. Uma uyifaka esikhundleni se-rye, khona-ke ukunambitheka kwesitsha esiphelile kuzoba kungathandeki. Ngakho-ke, kunconywa ukuyixuba ngokulingana okulinganayo nezinye izinhlobo ezinenkomba ye-glycemic yazo evunyelwe sikashukela. Izinga eliphelele le-GI akufanele lidlule amayunithi angama-50, inhlama evela engxubevange kufanele ibe nokunwebeka, ngokunambitheka okungcono.
Ukudla konke, okubandakanya imikhiqizo yenyama, kulungiselelwe njengengxenye yokudla kwabanesifo sikashukela.
Ukugxila kanye nososo nge-glucose ephezulu
Ngamanani aphakanyiswe ushukela njalo, umuntu onesifo sikashukela kufanele abambelele ezimisweni ezithile ekwakhiweni kokugcwaliswa kokudonswa okwenziwe ekhaya:
Inzuzo enkulu kakhulu yomzimba enamazinga weglucose aqhakaze kancane izoletha ukugcwaliswa kwemifino - ama-dumplings wakudala athathelwa indawo kalula nge-dumplings engadli kangako.
Amadombolo, angaqedwa cishe ngaphandle kwemikhawulo, kufaka phakathi umfula, izinhlanzi zolwandle ezinokuqukethwe okunamafutha amancane, iklabishi entsha, imifino ehlukahlukene nama-amakhowe.
Inyama ethambile, ehlanganiswe nezithako ezahlukahlukene (imifino, inhlanzi, amakhowe, amakhambi), inika ukunambitheka okukhethekile esitsheni esisele. Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 2, lokhu kugcwaliswa ngeke kube wusizo kuphela, kodwa futhi kuyonambitha.
Iresiphi yakudala yokwenza amadombolo enziwe ekhaya incoma ukubakhonza ngo-ukhilimu omuncu wama-degree ahlukahlukene wokuqukethwe kwamafutha. Endabeni yesifo sikashukela i-mellitus, lesi seluleko asisebenzi - umkhiqizo uvunyelwe ngokuphelele ukusetshenziswa ngenxa yamaphesenti aphezulu amafutha ezilwane.
Ukhilimu omuncu ungathathelwa indawo ngeyogathi, ngamaphesenti ayi-zero wamafutha, engeza imifino ebunjiwe, ama-clove ambalwa kagalikhi noma izimpande ze-ginger. Ngaphezu kweyogathi, ungathela isidlo esiphelile ngo-soya isoso - ukunikeza ama-dumplings ukunambitheka okungafani nalutho.
Ukupheka Amadombolo Wenziwe
Imibono yokwenza amadombolo ingatholakala ezincwadini ezahlukahlukene ngokudla kokudla. Isici esibalulekile kuzoba yizivivinyo ezingenhla nezidingo zokugcwalisa. Inani eliphansi lama-carbohydrate, amafutha wezilwane azosiza ukugwema ukweqa kushukela wegazi futhi kuvimbele ukukhula kwezinkinga kushukela.
Ukuze ukwenze, udinga inqwaba yezithako:
Amanzi okuphuza - 3 tbsp. nezinkezo
Amafutha eSesame - 1 tbsp. isipuni
Iklabishi elibunjiwe libe yimichilo emincane - 100 g,
Izimpande ze-ginger eziqunywe ku-cubes amancane - 2 tbsp. nezinkezo
Ingxube ye-rye ne-oat kafulawa - 300 g,
Isoso le-soya - 4 tbsp. nezinkezo
Uviniga webhalsamu - inkomishi eyi-1⁄4.
Ukugcwaliswa kuzolungiswa kuqala:
Inyama igayiwe ku-grinder yenyama iye kwisimo sengulube eyinyama,
Iklabishi elibunjiwe lifakwa enyameni,
Ubuciko bungeziwe. ukhezo we-ginger, uwoyela we-sesame, usoso wesoso.
Zonke izakhi zixutshwe kahle zibe yisisindo esiningi.
I-rye ne-oat ufulawa kuxutshwe ngokulingana,
Iqanda elilodwa lenkukhu lifakwa kulo,
Usawoti ungezwa emaphethelweni ommese, inani lamanzi adingekayo.
Inhlama ye-elastic iyagoqwa, edonswa ungqimba oluncane. Usebenzisa isikhunta sokudonsela phansi, ama-mugs asikwa lapho kufakwa khona isipuni senyama elungiselelwe, imiphetho yenhlama ifakwa ndawonye.
Ukuze ulungiselele isoso uzodinga isipuni se-ginger esisikiwe kanye no-soya isosi exutshwe no-3 tbsp. nezinkezo zamanzi okuphuza.
Ama-dumplings aselungele abilisiwe ebhuthini ephindwe kabili - ukulondoloza kangcono izakhi zomzimba futhi unikeze ukunambitheka okuhlukile. Inqubo yokupheka ithatha imizuzu eyi-10, umkhiqizo ophelile ubekwa epuletini futhi uthele nge-usoso.
Ukukhishwa kwendishi eseqediwe kuyizindikimba eziyi-15 zokudonsa eziqukethe cishe ama-15 g wama-carbohydrate (alingana ne-1 XE). Okuqukethwe kwekhalori okuphelele kungu-112 kcal. Indishi iphephe ngokuphelele kwiziguli ezinesifo sikashukela futhi ilusizo kulabo abafuna ukunciphisa isisindo somzimba sabo.
Ukudonswa okwenziwe ekhaya kwesifo sikashukela sohlobo 2 kuzosiza ukwehluka ekudleni okulinganiselwe okunikezwa ngokudla okukhethekile. Lesi sifo akusona isigwebo seziguli; akudingeki ziguqukele endleleni yokuphila yezitshalo kuphela. Amaphrotheni aqukethe imikhiqizo yenyama nawo ayadingeka emzimbeni, kanye namavithamini, amaminerali.
Izazi zokudla okunempilo zincoma ukungasebenzisi kabi ama-dumplings eyenziwe ekhaya sikashukela - ungadli kaningi ukwedlula kanye noma kabili ngesonto. Zinama-carbohydrate namafutha - ngakho-ke, ukusetshenziswa okunengqondo kuyadingeka.
Ngemuva kokudla kokuqala, isiguli kufanele senze isivivinyo senani le-glucose futhi siqiniseke ukuthi isidlo esilungiselelwe ngokuzimela asibanga ukuphambuka okubukhali kuzinkomba ezijwayelekile. Isidalwa ngasinye singumuntu ngamunye futhi indlela asabela ngayo kwizithako ezithile ayihlelekile.
Uma ukuhlolwa kwe-glucose kukhombisa imikhawulo yokujwayelekile, khona-ke ama-dumplings angadliwa ngaphandle kokwesaba impilo. Uma kutholakala ukuthi kukhona okungahambi kahle, isiguli kufanele sibonane nodokotela ophethe - ukuvela kokuzenzakalela kokungafani komzimba ezingxenyeni ngazinye zesitsha kungenzeka.
Kungenzeka yini ukudla amadombolo kashukela?
Ukukhishwa ngesifo sikashukela ngokusemthethweni kungukudla okungafuneki kakhulu, okungenxa yezizathu ezimbili: inhlanganisela engenakubalwa yokunambitha nezinzuzo zokugcwaliswa kwenyama yazo, kanye nokuba khona kwegobolondo eliminyene kusuka enhlama. Njengoba wazi, imikhiqizo kafulawa ingaba yingozi kwisifo sikashukela uma izinhlobo ezijwayelekile zikakolweni zisetshenziswa njengezinto ezingavuthiwe zemikhiqizo yazo. Umphumela uba inhlama ene-carb ephezulu, ukusetshenziswa kwayo okuzoholela ekugxumeni okubukhali ezingeni le-glycemia. Ngaphezu kwalokho, okuqukethwe ikhalori kwe-dumplings ngokusetshenziswa kwazo njalo kuholela ekuzuzeni isisindo ngisho nomuntu ophilile, ingasaphathwa eyeziguli ezinesifo sikashukela, okubaluleke kakhulu kuzo ukuqeda isisindo somzimba ngokweqile. Le nkinga yanda ngokusebenzisa umhluzi onamafutha, lapho kuphekwe khona amadombolo, no-ukhilimu omuncu - futhi umkhiqizo onekhalori ephezulu kakhulu.
Amadombolo wenyama yangaphambilini ngenyama yenkomo noma ingulube nenhlama eyenziwe ngofulawa kakolweni we-premium inenkomba ephezulu ye-glycemic futhi inika umzimba amakhalori amaningi, amaningi awo amane "axazululwe" ngamaphawundi asisindo.
Ngokuvamile, lesi sinqumo siyiqiniso futhi ngokudonswa, inkomba ye-glycemic ephezulu kakhulu njengaleyo yokulahlwa, kepha esikhundleni senyama kuvame amazambane (okuwumthombo wama-carbohydrate). Uma usebenzisa, ngokwesibonelo, ushizi we-cottage shizi noma ama-cherries njengokugcwaliswa, i-GI yokulahla izokwehla kumanani amukelekayo.
Kepha yonke le mikhawulo ehambisana nezidingo zokudla engxenyeni yokwelashwa kokudla ingazanywa ukuzungeza uma ubheka kabusha iresiphi yediphozi ngokwenza imizamo yakho yokuzilungiselela.
Isincomo esisobala kakhulu ukungathengi ama-dumplings efektri, ukhetha ukukhetha okwenziwe ekhaya, okulahlwa ekhaya okwenziwe. Isizathu inombolo yezici zokudla okunempilo okuhambisana nokudla okulula:
ufulawa kakolweni wesigaba esiphakeme kakhulu (kuyaqabukela - kuqala),
Inyama eyosiwe ngokufakwa kwe-lard, ubhekeni, imithambo nenye inyama engenacala,
ingeza ekwakhiweni kwamakha nezinongo,
ubukhona ekwakhekeni kokunambitheka kanye nezithasiselo ezinephunga lomsuka wokufakelwa.
Kuyiqiniso, ungathenga ama-daps eyenziwe ngesisekelo senyama yenkukhu kusuka kunenkukhu nenyama yengulube, okuzothinta nakanjani okuqukethwe kwekhalori kusitsha, kepha kulokhu, ikhwalithi yenyama enjalo eyosiwe ayinakuqinisekiswa esimweni semikhawulo yokudla. Lokhu kuholela esiphethweni esinengqondo sokuthi ukulungiselela ama-dumplings enziwe ekhaya kungcono ukusebenzisa ungayithengi okuthengiweyo, kepha inyama eyenziwe yasekhaya eyenziwe yapheka uqobo kusuka enyameni ekhethiwe. Kuyiqiniso, lapho uthenga ama-dumplings efektri, kufanele ugweme lezo lapho igobolondo lenhlama likhulu kakhulu futhi lihlobene nesixha senyama enezinhlamvu, ngoba hhayi inyama, kepha inhlama iyona ephikisana nokusetshenziswa kwalo mkhiqizo osekuqediwe.
Izithako ezamukelekayo zokupheka
Ngemuva kokubhekana neqiniso lokuthi inhlama ejwayelekile iyingozi kumuntu onesifo sikashukela ngamanani amaningi anjalo, kunengqondo ukubuza umbuzo: yikuphi ukudonswa kwabanesifo sikashukela ngokujwayelekile okungabhekwa njengokudla? Ngokusobala, udinga ukuqala ukuyiqonda le ndaba ngokukhetha ufulawa wokuxova inhlama, futhi phakathi kwezinketho ezikhona kukhona okulandelayo:
Kuluhlu bahlelelwe ukwehla ngokuhambisana nesiqondisi sabo se-glycemic, ngakho-ke kuyacaca ukuthi, ngokwesibonelo, inhlama yerayisi noma yenhlama ye-ravioli akuyona inketho engcono kakhulu. Ezinye izinhlobo ezinjenge-buckwheat, soy, i-pea noma i-oat, azifanelekile ekuphekeni, ngoba zinganamathela emanzini abilayo, ngakho-ke ochwepheshe batusa ukukhetha ufulawa we-rye nge-admixube ye-amaranth. Ngeshwa, le eyokugcina icishe ingatholakali ezifundeni ezingaphandle kwe-Asia kanye neNingizimu Melika, ngakho-ke iningi labanesifo sikashukela kuzofanela likhawulele ku-rye kafulawa. Inzuzo yayo, ngaphezu kwe-GI ephansi, ingukuqukethwe okuphezulu kwe-potassium, okuwusizo kakhulu ohlelweni lokujikeleza, kanye nokuba khona kokugxila okubalulekile kwensimbi ne-magnesium engasasebenzi kangako.
Ngokwesiko, ama-dumplings aqala ngokudla inyama egayiwe, ngakho-ke udinga ukuqala ukwenza iresiphi kuyo. Kuyaziwa ukuthi phakathi kwemikhiqizo yenyama enconyiwe yesifo sikashukela, abaluleke kakhulu yizinhlobo ezinamafutha aphansi ezinkukhu, okungukuthi amabele enkukhu noma angamawele. Ngaphezu kwalokho, lezi zingxenye zezidumbu zezidumbu zilungile ngokuhlanekezela enyameni enezinhlamvu, kodwa ukungathandeki kwazo okuwukuntuleka kwamafutha, okwenza inyama ukunambitheka kumile. Ngemvume kadokotela oholayo, ungangeza inyama yengulube encane enkukhuni ukuze umkhiqizo wokugcina umnandi kakhulu futhi unambitheke ngokwengeziwe.
Kodwa akudingekile ukukhawulelwa yinyama kuphela lapho ugcwalisa ama-dumplings. Inani elikhulu lezithako ngeke lizozuzisa kuphela impilo yesifo sikashukela, kodwa futhi lihlukanise isidlo sakudala ngendlela yasekuqaleni kakhulu. Isibonelo, ochwepheshe abaningi be-Culinary bacebisa ukuzama ama-dumplings ngamakhowe okugcwalisa ngokuphelele ukunambitheka okusha kwenkukhu enamakhasi. Ngenhloso efanayo, ungazama ukugcwalisa isidlo ngamashizi afakwe emanzini anosawoti afana nesuluguni noshizi we-feta, kanye nezithako eziqondile: ama-walnuts, iminqumo, ulwandle i-kale, ilayisi nobhontshisi.
Kunezindlela zokupheka ezingaphezulu kakhulu, ngokusho ukuthi iyiphi inhlanzi nokudla kwasolwandle okufanele kusetshenziselwe inyama enezinhlamvu: i-cod, i-pike perch, i-sturgeon, i-pike noma imbaza.
Ukudonswa kwangempela kwesifo sikashukela sohlobo 2 kufanele kube kokudliwayo, futhi yize lokhu ngokuqinisekile kuzothinta ukunambitheka kwabo, ukulandela amakhuphoni wokudla okuqinile kubaluleke kakhulu. Izindlela zokupheka ezinesifo sikashukela sohlobo 2 zihlukahlukene kakhulu, futhi kuhlala kukhona ukukhetha, futhi enye yezindlela ezidumile yile elandelayo:
tbsp ezimbili. l i-oat bran
tbsp ezimbili. l mahhala
tbsp ezimbili. l amaprotheni e-soy
eyodwa nohhafu kuya ku-tbsp amabili. l isitashi sommbila
75 ml wobisi lwe-skim
uhhafu tsp usawoti.
Ukupheka kuqala ngeqiniso lokuthi kuyadingeka ukugaya i-bran bese uhlanganisa esitsheni esisodwa nge-gluten, amaprotheni kanye nesitashi, ngemuva kwalokho udinga ukushayela iqanda lenkukhu kuyo. Ukusuka kwinhlanganisela eyumphumela, hlanganisa inhlama (engeza ubisi ngezigaba) ngesimo sebhola eliminyene, okufanele limbozwe ngendwangu futhi lishiywe imizuzu eyi-15. Isinyathelo esilandelayo ukugoqa inhlama ibe ungqimba elincanyana bese ubumba amadombolo, ukuwafaka ngenyama enziwe inyama. Udinga ukubaphekela njengenjwayelo, kodwa kungcono ukubakhonza ngo-ukhilimu omuncu, kepha nge-Bolognese sauce.
Enye iresiphi incoma ukuzama ukupheka ama-dumplings nge-turkey enamakhasi, into yokuqala okufanele yenziwe ukuxuba ama-200 gr. u-rye ufulawa neqanda elilodwa nenani elincane lamanzi amsulwa, uxove inhlama kubo bese uyibeka esiqandisini imizuzu eyi-15. Okwamanje, baqhubekela ekugcwalisweni: 150 gr. u-anyanisi oqoshiwe kanye nezimbotshana ezimbili zikagalikhi ogayiwe zithosiwe ku-oyela yemifino, bese ufaka kuzo u-150 g. fillet of turkey, emhlabathini inyama eyinyama. Ukuze uthole piquancy, kuvunyelwe ukwengeza i-basil encane ne-allspice epanini. Ngemuva kokusika imibuthano yobungako obulingana nenhlama bese besakaza okugcwalisiwe okuhleliwe kuyo, benza amadombolo bese bepheka emanzini anosawoti cishe imizuzu eyisikhombisa. Ngaphambi kokuphaka, isidlo singahlotshiswa ngemifino (iparsley noma dill). Ngaphezu kwalokho, ungathela emafulethini okuphuza umhluzi osele, ozovimbela ama-dumplings ukuthi angaboli ukuphuma noma apholise ngesikhathi sokudla.
Kufanele kube yini ukugcwaliswa
Abantu abanesifo sikashukela bahambisana nokudla inyama ngenhlama. Lokhu kungamafutha ayingozi futhi angadingekile, azonikela kuphela ekwandeni kwesifo. Ngakho-ke, ukugcwaliswa kufanele kuthathwe ngenyama inyama, inhlanzi noma imifino. Ukwenza ijusi yenyama entsha yokudla, ingahlanganiswa ekugcwaliseni iklabishi noma i-zucchini.
Kwabanesifo sikashukela, amadombolo ngokugcwaliswa kwemikhiqizo elandelayo alungele kahle:
Inkukhu, unogwaja noma inyama ye-turkey
Isitsha esinokugcwaliswa okunjalo ngeke samukeleke ekusetshenzisweni sikashukela kuphela, kodwa futhi sizosiza kakhulu. Kepha kufanelekile ukukhumbula ngesilinganiso esivumelekile sikasawoti, okuthi kumthamo omkhulu singalimaza kakhulu umzimba, senziwe buthaka yisifo esinjalo.
Usawoti uvusa ukwanda kwengcindezi yegazi futhi ugcine uketshezi oluningi emzimbeni.
I-Sauce yisikhathi esivuthayo sokwehliswa kwamadombolo abilisiwe. Ezimweni eziningi, kusetshenziswa ukhilimu omuncu, imayonnaise ne-ketchup. Kodwa-ke, le yimikhiqizo esohlwini lokuvalwa kwesifo sikashukela, ngaphandle kokhilimu omuncu wokuqukethwe okunamafutha amancane. Ukwenza isengezo se-sauce sibe lusizo kwizazi zesifo sikashukela, ungazenza wena usebenzisa i-yogurt enamafutha aphansi ngamakhambi.
Ijusi lelamusi liyisengezo esihle kuma-dumplings esikhundleni se-sauce.
Amadapayipi alungiselelwe ngokuzimela ngokuya ngokufakazelwa okufakazelwe nokunconyiwe kuzoba wusizo kakhulu kwisifo sikashukela. Inketho enhle kungaba yindlela yokudla yokudla okunejikijiki nokunempilo ngesitayela sasemuva, esinikezwe ngezansi.
i-turkey fillet - cishe amagremu angama-500,
isosi yesoya - izipuni ezi-4,
uwoyela wesame - 2 wezipuni,
uviniga we-balsamic - amagremu angu-50,
izimpande ze-ginger ezisikiwe - cishe amagremu ayi-10,
iklabishi lase-China elikhethiwe - cishe amagremu ayi-100,
Kuyadingeka ukwenza i-mincemeat, igaya inyama kwi-grinder yenyama. Iklabishi laseBeijing longezwa kulo kanye nezipuni elilodwa le-soy sauce, i-ginger ne-oyile ye-sesame. Isisindo esidingekayo sixubekile kahle.
Ukuze kuhlolwe, kuthathwa irayisi noma ufulawa oxutshwe emanzini bese kufakwa iqanda nenani elincane likasawoti (esicongweni sommese). Inhlama iyagoqwa kuze kube yilapho isisindo esingenalutho Kufanele kube nokunwebeka hhayi ukunamathela ezandleni zakho.
Inhlama eqediwe inyakaziswa kakhulu bese yenziwe imibuthano emincane. Ungakwenza lokhu ngezibuko ezincane.
I-spoonful encane yenyama nengulube ifakwa enkabeni ye-mug ngayinye. Inhlama igoqwe ngenyama eyosiwe futhi iklebhulwe ukuze ukugcwaliswa kungabi ngaphezu kwemiphetho.
Ama-dumplings afakwe emfashini abekwa ebhodini elihanjiswa ngofulawa bese athunyelwa efrijini. Ngakho-ke ama-dumplings angagcinwa isikhathi eside.
Uma kunesidingo, thatha inani elidingekayo le-ravioli bese upheka ngendlela ejwayelekile emanzini anosawoti kuze kufike ithenda.
Kuzoba ngcono uma upheka isidlo ngendlela eshisayo yasemuva. Yilapho lapho phansi sebiler ebili imbozwe ngamaqabunga eklabishi. Ngakho-ke, inhlama ngeke inamathele, futhi ama-dumplings azothola iphunga elimnandi elinamandla kusuka kwiklabishi. Amadombolo abilisiwe imibhangqwana engadluli imizuzu eyi-10.
Isoso lenziwa ngokuxuba uviniga webhalsamu, u-soy isoso, ujinja kanye nezipuni ezintathu zamanzi. Ukudonswa ngomumo kuyaniselwa nakho.
Lesi sidlo sokudla sinama-kilojoule angama-112 nje, amagremu ayishumi eprotheyini, amagremu amahlanu wamafutha, amagremu ayi-16 ama-carbohydrate, igremu elilodwa le-fiber ne-180 mg kasawoti.
Inyama evunyelwe yesifo sikashukela
Inyama ingumthombo omuhle wamaprotheni ezilwane. Umzimba udinga isifo sikashukela ukuze ubuyisele amaseli. Ngakho-ke, kufanele kufakwe ekudleni. Kepha ngenxa yokuthi inyama enamafutha ayinconywa sikashukela, udinga ukunikela ukukhetha ezinhlamweni eziphansi zokudla zomkhiqizo.
Inyama yenkukhu ne-turkey ithathwa njengokudla futhi inenzuzo enkulu emzimbeni. Kodwa-ke, lapho ulungiselela le nyama, kubalulekile ukuthi unake lezo zinto:
isikhumba senkukhu sinamafutha, uma sipheka kufanele sisuswe siphekwe ngaphandle kwaso,
lapho kuthosiwa, ngisho nenyama edliwayo izoba nekhalori ephezulu kakhulu, kungcono ukuyipheka noma ukuyipheka,
enyameni encane kuzoba namafutha amancane ngaphansi kwesikhumba,
umhluzi wenkukhu - onamafutha impela.
Ingulube ingenye yezinhlobo ezikhuluphele zenyama. Kepha kuyasiza futhi kuyadingeka ngamanani athile emzimbeni. Inenani elikhulu lamaprotheni kanye ne-vithamini B1. Ukuze kudliwe ngabantu abanesifo sikashukela, kuyadingeka ukuthi kususwe wonke izingqimba ezinamafutha enyameni bese uyihlanganisa nemifino enjenge-bell pepper, iklabishi, utamatisi kanye nemidumba.
Inyama yenkomo - kubhekwa njengenye yezinhlobo zenyama ezinempilo kakhulu. Iyakwazi ukuguqula ushukela wegazi ngokwejwayelekile, ngoba inomphumela omuhle wokusizakala kumanyikwe. Uma uthatha izingxenye eziswelayo zenyama yenkomo, zingasetshenziswa njengokungezelelwa kwenyama eyosiwe ye-ravioli.
Ukungeza inani elikhulu lama-imifino - dill, iparsley, i-cilantro kuyo kuzosiza ukunciphisa ukusetshenziswa kosawoti kanye nezinongo zenyama.
Ama-dumplings wenyama ejwayelekile, ikakhulukazi lawo athengwa esitolo, awanconywa ngokwezinga elithile kubantu abanesifo sikashukela. Kodwa-ke, abakwazi ukuziphika ngokwabo lokhu kudla okumnandi uma belungiselelwe kusuka kumikhiqizo enconyelwe abanesifo sikashukela.